अमेजनमा राम्रो स्थान र कसरी त्यहाँ एक सफल विक्रेता बन्न सक्नुहुन्छ?
यसलाई सामना गरौं - यदि तपाईं अमेजनमा राम्रो स्थानको रूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले निम्न बयान लिनको लागि प्रदान गर्न आवश्यक छ।. मेरा मतलब छ कि धेरै धेरै इ-वाणिज्य र एसईओ समुदायका सदस्यहरू (र भित्ता-समयका विक्रेताहरू) प्राय: प्राय: एक विशाल अवसरलाई बेवास्ता गर्दैछन् - Google खोजी इञ्जिनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर. निस्सन्देह, यो संसारको खोज विशाल हो. तर कुरा यो हो कि यदि तपाईं अमेजनमा बेच्नु हुन्छ भने, यो भीड गरिएको अनलाइन बजार तपाईको लागि अरु भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।. किन? मुख्यतः किनकि जब बिक्री मा खोज को खोज गर्न को लागी ठीक हो, अमेजन केहि तीन गुणा अधिक खोज मात्रा मा छ. प्रभावकारी, सही? त्यसो त, तल म व्यावहारिक ज्ञानको टुक्रा साझेदारी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ कि तपाई अमेजनमा राम्रो स्थान पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ अन्ततः त्यहाँ एक सफल सफल रिटेल व्यापारी बन्छ.
रेज रेजिज मा राम्रो तरिकाले अमेज़न
सबै भन्दा पहिले, चलो प्रमुख खोज इन्जिन ( र अमेजनमा राम्रो तरिकाले रैंक गर्ने - पैमानेमा लिइएको.
रूपान्तरण र प्रयोगकर्ता सन्तुष्टि
केहि र अरू भन्दा अघि, गुगल र अमेजनको बीच विविधताको मुख्य बिन्दु यो हो कि मुख्य खोज इन्जिन मुख्य रूपमा विज्ञापनहरू बिक्री गर्न डिजाइन गरिएको छ - तपाईलाई द्रुत उत्तर दिँदै - यो उपयुक्त बनाउने दोहोर्याइएको खोजको लागि फर्काउनुस् ताकि तपाईले थप खोजहरू गर्नुहुनेछ, र अन्तमा - विज्ञापनहरूमा अधिक क्लिकहरू दिनुहोस्. नतिजाको रूपमा, Google को सफलता मेट्रिक्स मुख्य रूपमा प्रति प्रयोगकर्ता औसत प्रति भ्रमणको साथ विपरित गर्दै छन्, साथै साथ-क्लिक-दर. यद्यपि, तथापि, अमेजनले त्यहाँ धेरै राजस्व र कुल मार्जिन दिने प्रत्येक मा एक विक्रेता को प्रति निश्चित बिक्रेता को लागी मापा मा अधिक बिक्री मा अधिक छ।. यसको अर्थ अमेजनले यसको खोज नतिजा पुन: व्यवस्थित गर्न सम्भव छ त्यसैले अधिक सम्भावित क्लाइन्टहरू सफलतापूर्वक वास्तविक खरीददारहरूमा परिवर्तित हुन्छन्. यसैले यदि तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि अमेजनमा अझ बढी बेच्न चाहानुहुन्छ - तपाईलाई आफ्नो कन्फिगरेसन सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ. बस किनकी A9 खोज रैंकिंग एल्गोरिदम को दृष्टिकोण देखि, अधिक रूपांतरण को मतलब अमेज़न ईकमर्स व्यापार मंच को लागि अधिक मुद्रा प्रदान गर्दछ.
प्रदर्शन र प्रासंगिकताका अमेजनका कारकहरू
प्रायः सामान्यतया, अमेजनमा मुख्य आधारभूत कारकहरू दुई फरक श्रेणीमा विभाजित हुन्छन् - प्रदर्शन र कारकहरूको कारक प्रासंगिकता. र यहाँ हामी अन्तमा बिन्दुमा आउँदैछौँ - तपाईले अमेजनमा राम्रो स्थान निर्धारण गर्न कसरी बुझ्न यी दुई कारकहरू बीचको स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ. यहाँ तिनीहरू छन्.
प्रदर्शन कारकहरु - प्रदर्शन को मुख्य कारकहरु को बारे मा सबै केहि (वास्तव मा रूपान्तरण दर, साथ नै उत्पादन मूल्य र छवियों) वास्तव मा धेरै जटिल छैन. बस राख्नुहोस्, यी प्रत्येक कारकहरू अमेजनमा शक्तिशाली सिग्नल दिनेछन् जसले तपाईंको उत्पादन अझ राम्ररी बेच्न सम्भव छ, जब राम्रो हुन्छ.
प्रासंगिक कारकहरु - यो कोटी तपाईको उत्पाद पेज को मुख्य फील्ड को लागि सूचीबद्ध छ किनकी A9 को उपयोग को लागी निर्धारित गर्न को लागी कि तपाईंको उत्पादन को प्रयोगकर्ता खोज को सट्टा सही. तपाईंको सूचीको मुख्य तत्वहरू यहाँ प्रासंगिक प्राथमिक कारकको रूपमा पहचिएको छ: उत्पादन शीर्षक, ब्रान्ड, बुलेट बिन्दुहरूको सूची, उत्पादन विवरण, ब्याकइन्ड खोजी सर्तहरू, बिक्रेता नाम, सेटअप, दैनिक प्रक्रिया, फिल्टर फील्डहरू, ग्राहक समीक्षाहरू, राम्रो तरिकाले तपाइँको कुल बिक्री रैंक Source .